PSJTV | २४ दाना अंगुरकाे मूल्य १२ लाख!
२४ दाना अंगुरकाे मूल्य १२ लाख!
सोमबार, २७ माघ २०७६ पिएसजे न्युज
नेपालमा सिजन सुरु भएपछि अंगुर प्रतिकिलो सय रुपैयाँसम्ममा पाउन सकिन्छ। तर एक गुच्छा अंगुरको मूल्य नै १२ लाख रुपैयाँ पर्छ भनेको सुन्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्न सक्छ। हो, जापानमा मानिसले १२ लाख रुपैयाँमा अंगुरको गुच्छा किनिरहेका छन्। यो रातो अंगुरको जातिको नाम रुबी रोमन हो।
यो विशेष प्रजातिको एउटा अंगुरको वजन करिब २० ग्राम हुन्छ। एक गुच्छमा करिब २४ वटा अंगुर हुन्छन्, एजेन्सीलाई उधृत गर्दै आजको कारोबार दैनिकमा खबर छापिएको छ। उच्च मूल्यका कारण यो रातो अंगुर विशेष गरी धनीको फलका रूपमा चिनिएको छ। १२ वर्षपहिले अंगुरको खास प्रजाति इसिकावा प्रान्तको सरकारले विकास गरेको हो।
यो अंगुरको स्वाद पनि अत्यन्त मीठो हुन्छ। जापानमा रातो अंगुर विलासी फलको श्रेणीमा पर्छ। जापानमा यो फललाई उपहारका रूपमा दिने गरिन्छ।
रामनवमी’पर्व आज मनाइँदै
कालापानी विवादबारे सत्ता-प्रतिपक्षीको एउटै स्वर
भेटियो शंकास्पद भिडियो, युवतीलाई बलि दिन भारत लगिएकाे आशंका
काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले इसाई धर्मालम्बीहरुको महानपर्व ‘क्रिसमस डे’का अवसरमा शुभकामना दिएकी छन् । आज (बुधबार) एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका इसाई धर्मावलम्बी नेपालीहरुमा ...
25th Feb 2020 पिएसजे न्युज
मौसम परिवर्तन हुँदा मानिसमा टाउको दुख्ने समस्या पनि बढ्न सक्छ। यसका लागि उपचारमा ख्याल गरिहाल्नुपर्छ। समस्या सामान्य हो भन्दै हामी उपचार गर्न जाँदैनौँ। केही समयमै सञ्चो हुन्छ अथवा केही दिनमा ठिक ...